पाल्पाका प्रमुख ११ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू | पाल्पाली संगम
पाल्पाका प्रमुख ११ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू
रानीमहल : पाल्पाकाे तानसेन बाैघागुम्हामा रहेको अर्को पर्यटकीय गन्तव्य हो रानीमहल । यसको आफ्नौ ऐतिहासिक विशेषता रहेको छ । रानीमहल वि.स. १९५० मा शिलान्यास भइ चार वर्षमा दरबार मन्दिर पाटीपौवासहितको निर्माण कार्य पूरा भएको हो । पाल्पाको तानसेनबाट १३ किलोमिटर दूरीमा बौद्धगुम्बा अवस्थित रानीमहल दरबार नेपालकै ताजमहलका रूपमा चिनिन्छ । कालीगण्डकी नदीको उत्तरतर्फ हानिने मोडमा विशाल चट्टानमाथि पश्चिमी कलाशैलीमा रहेको रानीमहल दरबारको बायाँतर्फ ढुङ्गाबाट निर्मित दुईवटा पोखरी, दाहिनेतर्फ पहरा दिने स्थल छ भने खुड्किलोको बायाँतर्फ एउटै किसिमको शिव र गङ्गाका दुई मन्दिर छन् ।यो महल युयानीशैलीमा बेलायती इन्जिनियरको डिजाइनमा बनाइएको हो । यस महलको पूर्वतिर खड्ग शमशेरको पूजा गर्ने कोठा, माथिल्लो तलामा बैठक कोठा र मध्य तलामा खड्ग शमशेरका कोठाहरू रहेका छन् । त्यस्तै वरिपरि रहेको बगैँचा र रानी पोखरीले महल आकर्षक देखाएको छ ।
प्रकृतिमय श्रीनगर : पाल्पाको श्रीनगर पनि प्रकृतिप्रेमीका लागि मनमोहक लाग्दछ । तानसेन नगरपालिका पहिले बतासेडाँडा वृक्षहीन सुख्खा थियो । तर पछि विभिन्न बिरूवाहरू रोपेर रमणीय उद्यानमा परिणत गरियो र बतासेडाँडा श्रीनगर बन्यो । यहाँ मन्दिर, बुद्धको मूर्ति र बगैँचाहरूसमेत छन् । झण्डै १५०० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको श्रीनगर शान्त, सुरम्य जङ्गल, समय अनुकूल स्वस्थ्यकर हावापानीका लागि उपयुक्त ठाउँ कहलिएको छ । श्रीनगर बाघ, चितुवा, खरायो, दुम्सी आदि जनावरहरू र कालिज, तित्रा, कोइली प्रजातिका पन्छीहरूको बसोबास बनेको छ । वनविहार र वनभोजका लागि प्रख्यात यो ठाउँबाट माछापुच्छ्रे, हिमालचुली, अन्नपूर्ण, काञ्जीरोवा, मनास्लु, गणेश हिमाल आदिको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सूर्योदय, माडी उपत्यका र सफा मौसममा भारतको उत्तरी भाग गोरखपुरसम्मको रेलहरूको समेत रोमाञ्चक अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
अमरनारायण मन्दिर : वि.सं. १८६३ मा भगवान विष्णुका भक्त अमरसिंह थापाले सुन्दर बगैचा र अटुट पानीको मुहान नजिकै निर्माण गरेका अत्यन्त कलात्मक मन्दिर अमरनारायण मन्दिर हो । यो मन्दिर तानसेन नारायण स्थानमा अवस्थित छ । भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन जाग्राम बस्ने र नवमीका दिनमा रथ निकाली जात्रा गर्ने परम्परा अद्यापि छंदैछ । मन्दिर संचालन गर्नका लागि गुठीको समेत ब्यवस्था गरिएको छ । मन्दिरमा रहेका कलाकौशलता बुझ्नका लागि यसबाट सहयोग पुग्छ । यसका साथै इतिहासप्रति रुचि राख्ने मानिसका लागि पनि अमरनारायण मन्दिरले आकर्षित गर्छ ।
पाल्पा दरबार : पाल्पा दरबारमा अहिले पाल्पा दरबार संग्राहलय छ । यस क्षेत्रकै विशेष संग्राहलयको रुपमा स्थापित गर्ने गरी ५ नं. प्रदेश सरकारले यहाँ लगानी गरिरहेको छ । तत्कालित पश्चिम कमाण्डर जनरल प्रतापशमशेरले प्रशासकीय कार्य सन्चालन गर्न निजि प्रयोजनका लािग वि.सं. १९६९ मा बेलायती शैलीमा बनाएका थिए । यो दरबार ७–१४–२–१ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । अत्यन्त आधुनिक शैलीमा बनाईएको यस दरबारमा ४ तला, ६३ कोठा, २ बैठक कोठा र २ बुर्जा समेत रहेको थियो । पहिले दरबारमा अधिकांश सरकारी कार्यालय संचालनमा रहेको थियो । माओवादी जनयुद्ध ताका ध्वस्त गराइएको यो दरबारको पुरानै स्वरुप अनुरुप पुनर्निर्माण सकिएर अहिले पाल्पा दरबार संग्राहलय संचालनमा छ ।
भैरव मन्दिर : पाल्पा जिल्लाको सदरमुकामदेखि ९ किलोमिटर पश्चिम रिब्दीकोट गाउँपालिकाको भैवस्थानमा भैरव मन्दिर छ । पहाडको टुप्पोमा अवस्थित ठुलो त्रिशुल रहेको यो मन्दिरमा प्रायः सधैभरि नै मेला लागेता पनि विशेषगरी मंगलबार र शनिबारका दिन पूजा लाग्दछ । विभिन्न चाडपर्वहरुमा बोका, हाँस, कुखुरा, र पाडाहरुको बली यहांका कालभैरवलाई दिईन्छ । यस क्षेत्रबाट अधिकांश हिमशिखरहरुको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । यो मन्दिरमा पूजा गरेर आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्ने र शक्ति आर्जन गर्न सकिने विस्वास छ । यसलाई यस क्षेत्रकै ठूलो शक्तिपीठको रुपमा लिइने गरिन्छ ।
भगवती मन्दिर : तानसेन भगवति टोलस्थित उजीरसिंह थापाले बनाउनु भएको यो मन्दिरको छुट्टै विशेषता छ । आफ्ना सानो फौजको प्रयोगद्धारा ब्रिटिश इण्डिया कम्पनीलाई पराजित गरेमा मन्दिर बनाउने भाकल गरी युद्धमा होमिएका उजीरसिहं थापाको फौजले तत्कालीन पाल्पाको जीतगढीमा अड्ग्रेजहरुलाई परास्त गर्न सफल भएपछि बनाइएको यो मन्दिरमा विजय उत्सवकै प्रतीकस्वरुप प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण नवमीका दिन विशाल रथयात्रा उत्सव मनाईन्छ । वि.सं. १९९० मा पुरानो मन्दिर भत्किएकाले यसको पुनः निर्माण गरिएको हो ।
ऋषिकेश मन्दिर : सदरमुकाम तानसेनदेखि ३० कि.मि. पश्चिम मणिमुकुन्द सेनले स्थापना गरेको यो मन्दिरमा कलात्मक ढङ्गले कुंदिएका विभिन्न मूर्तिहरु छन् । यस क्षेत्रलाई रुरु क्षेत्र पनि भनिन्छ । श्री स्वस्थानी ब्रतकथाअनुसार यहा सतीदेवीको अङ्ग पतन भई सत्येश्वर महादे व उत्पन्न भएको थियो, त्यसैले सत्येश्वर महादेवको मन्दिर पनि छ । यस क्षेत्रमा माघे सक्रान्तिमा तीन दिनसम्म विशाल मेला लाग्दछ । स्याड्जा, पाल्पा, गुल्मीको संगमस्थल यस ठांउमा तीर्थ गर्न भारत लगायत अन्य देशका हिन्दु भक्तजनहरुसमेत आउने गर्दछन् ।
कौडेलेक : पाल्पा मूलत पहाडै पहाडले घेरिएको जिल्ला हो । माथागढी–३, कसेनीको कौडेलेक पाल्पाको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको लेक मानिन्छ । यहाँबाट पाल्पाको अन्न भण्डार माडीफाँट, सदरमुकाम तानसेन, उत्तरतर्फका हिमश्रृंखलाहरु देखिन्छ । यसका साथै यहाँबाट ५ नं. प्रदेशको राजधानी बुटवल, भैरहवा, परासी लगायतका शहर समेत देखिन्छ । रातको समयमा यहाँबाट उत्तरतर्फ तानसेन र दक्षिणतर्फ बुटवल शहर झिलिमिली देखिन्छ । प्रकृतिसँग रमाउन रुचाउने आगन्तुकका लागि कौडेलेक पनि आकर्षक बन्न सक्छ । कौडेलेकको तल्लो भागमा मगर समुदायको मात्र बस्ती ओलेस रहेको छ ।
रामपुरको तालपोखरा : रामपुर नगरपाािलकाभित्रको महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो, तालपोखरा । यहाँ जाने पर्यटकले डुंगामा शयर गरेर आनन्द लिन सक्छन् । दुई वर्षदेखि यहाँ सानो तालमा डुंगा संचालनमा छ । पोखराको फेवाताल घुम्न जाने पर्यटकले तालपोखरामै फेवातालको मजा लिन सक्छन् । स्थानीय बासिन्दा र रामपुर नगरपालिकाको संयोजनमा यहाँ मानव निर्मित ताल बनाइएको हो । लगभव २० रोपनी क्षेत्रफलमा ताल फैलिएको छ । बीच भागमा फेलातालमा जस्तै मन्दिरको दर्शन पनि तालपोखरामा घुम्न जाने पर्यटकले गर्न सक्छन् ।
रम्भादेवी मन्दिर : रम्भा गाउँपालिकाको ताहुमा रहेको रम्भादेवीको मन्दिर आजभोली ग्रामीण पर्यटनको लागि गन्तब्य बनेको छ । सरकारले घोषणा गरेको नयाँ एक सय पर्यटकीय गन्तव्यहरु भित्र पाल्पा जिल्लाको रानीमहल, तालपोखरा र रम्भादेवी एक सय एक भित्र परेको छ । पूर्वी पाल्पाको ताहूमा रहेको रम्भादेवीको ऐतिहासिक महत्व भएको धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । मगर जातिहरुको वाहुल्यता रहेको पुर्वी पाल्पामा रम्भादेवी सवै जाती जनजातीहरुको आस्थाको केन्द्र बिन्दु पनि हो । रम्भादेवीमा वाह्य पर्यटकहरु कमै पुग्ने भएपनि ग्रामीण पर्यटकहरुको लागि गन्तब्य भएको छ । रम्भादेवीको वन जंगल प्राकृतिक रुपले रमणीय छ । सामुन्द्रिक सतह देखि रम्भादेवी चार हजार दुईसय फिट उचाईमा पर्दछ ।
सत्यवती ताल : पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–४, मा सत्यवती ताल रहेको छ । यहाँ हरेक वर्ष कात्तिके पूर्णिमामा चिच्याएर वरदान (वर) माग्ने मेला लाग्दछ । रातको समयमा सत्यवती तालमा लिंगो गाडेर बिहान सही लिंगो चिनेर पूजा गर्ने चलन रहेको छ । सत्यवती बजैको कानले नसुन्ने भएपछि चिच्याएर वर माग्ने चलन रहेको छ । सत्यवतीदेवी कानले नसुन्ने धार्मिक विश्वासका कारण रातमै चिच्याएर वर माग्ने चलन रहेको हो । त्यहाँ पुग्ने हजारौँले एकैपटक चिच्याएर वर माग्दा जंगलको सुनसान रात गुञ्ज्यमान हुने गर्दछ । तानसेन बुटवल सडकखण्डको चौबिस माइलबाट एकघण्टा ३० मिनेटको उकालो चढेपछि सत्यवती ताल, सत्यवती बजैको मन्दिरमा पुग्न सकिन्छ । सत्यवती बजैका लागि परेवा र बाख्राको बलि दिने चलन छ ।
(तस्विर र शव्द संयाेजन इरानीमहल डटकम)